नेपाल आज | कस्तो छ आजको विनिमय दर?
कस्तो छ आजको विनिमय दर?
काठमाडौंः शनिबार नेपाली बजारमा अमेरिकी डलरसहित अन्य देशको मूल्य घटेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर ११३ रुपैयाँ १२ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ११३ रुपैयाँ ७२ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै आज एक मलेसियन रिँगिटको खरिददर २७ रुपैयाँ २ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर २७ रुपैयाँ १७ पैसा तोकिएको छ ।
त्यसैगरी त्यस्तै एक कतारी रियालको खरिददर ३१ रुपैयाँ ६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३१ रुपैयाँ २३ पैसा तोकिएको छ । आज एक युके पाउण्ड स्ट्रलिङको खरिददर १४५ रुपैयाँ तोकिएको छ भने बिक्रिदर १४५ रुपैयाँ ७७ पैसा तोकिएको छ । त्यसैगरी आज एक बहराईन दिनारको एकको खरिददर ३ सय रुपैयाँ ४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय १ रुपैयाँ ६३ पैसा तोकिएको छ । एक युएई दिरामको खरिददर ३० रुपैयाँ ८० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ९६ पैसा तोकिएको छ ।
त्यस्तै एक साउदी रियालको खरिददर ३० रुपैयाँ १६ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३० रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै कोरियन वन एक सयको खरिददर ९ रुपैयाँ ६३पैसा तोकिएको छ भने बिक्रीदर ९ रुपैयाँ ६८ पैसा तोकिएको छ । त्यसैगरी आज एक कुवेती दिनारको खरिददर ३ सय ७२ रुपैयाँ ४० पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय ७४ रुपैयाँ ३७ पैसा तोकिएको छ । त्यसैगरी एक अष्ट्रेलियन डलरको खरिददर ७७ रुपैयाँ २१ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ७७रुपैयाँ ६२ पैसा तोकिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक विनिमयदर